बालोन डी’ओर अवार्डका लागि मनोनयन सार्वजनिक, को-को परे सूचीमा ? – Everest Dainik – News from Nepal
बालोन डी’ओर अवार्डका लागि मनोनयन सार्वजनिक, को-को परे सूचीमा ?
एजेन्सी, असोज २३ । प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने बालोन डी’ओर २०१८ का लागि ३० खेलाडीको प्रारम्भिक मनोनयन सार्वजनिक भएको छ।फ्रान्सेली फुटबल म्यागजिनले प्रदान गर्ने अवार्ड ‘बालोन डी’ओर’को लागि ३० जनाको मनोनयन सार्वजनिक भएको हो।
फिफाले प्रदान गर्ने फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड २०१८ सम्पन्न भएको केही समयपछि व्यक्तितर्फको अर्को महत्वपूर्ण अवार्डका लागि साबिक विजेता क्रिष्टियानो रोनाल्डोसँगै लियोनल मेस्सी, नेइमारसँगै फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड विजेता लुका मोड्रिक, ग्यारेथ बेल, केलियन एम्बाप्पे, एन्टोनी ग्रिजम्यान, मोहम्मद सालह, ह्यारी केन, पउल पोग्बा, सर्जियो अग्युरोसहितका खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्।
च्याम्पियन्स लिग विजेता रियल मड्रिडका खेलाडी मनोनयनमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै छन्। रियल मड्रिडका ८ खेलाडी प्रारम्भिक मनोनयनमा परेका छन्। यस्तै प्रियिमर लिगका ११ खेलाडी ३० खेलाडीको सूचि भित्र अटाएका छन्।
विश्व फुटबलको प्रतिष्ठित अवार्ड सन् १९५६ देखि वर्षको उत्कृष्ट फुटबलरलाई प्रदान गरिदै आएको छ। विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय फिफासँगको सहकार्यमा ६ वर्षसम्म यो अवार्ड फिफा बालोन डी’ओरको रुपमा प्रदान गरिएको थियो । तर सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा फिफाले सहकार्य अन्त्य गरेसँगै फेरि भिन्नै रुपमा अवार्ड दिन थालिएको छ।
त्यसयता फ्रान्स फुटबल म्यागजिनले हरेक वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीलाई अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । बालोन डी’ओरमा सन् २००८ यता रोनाल्डो र मेसीको दबदबा कायम छ। ५ पटक मेसीले जिते भने ५ पटक रोनाल्डोले जितेका छन्। अवार्ड समारोह डिसेम्बर ३ मा पेरिसमा आयोजना हुनेछ।
सूचीमा पर्न सफल
ट्याग्स: बालोन डी’ओर अवार्ड